Chainalysis - boka kuti akaparadza kusazivana Bitcoin - Blockchain News
Chainalysis – boka kuti akaparadza kusazivana Bitcoin
Kazhinji dzakabudirira, vachishingaira basa iri pasi nzira wekutaura mitemo mutemo cryptocurrencies uye ichivharira. Mune drafting kuti mari, vanowanzoororwa achibatsirwa makambani kuongorora blockade network, chimwe chezvinhu nomukurumbira – Chainalysis. chete 2017 Kambani vaiwana pamusoro $ 700,000, kushanda pamwe nehurumende uye Vezvemitemo.
Chainalysis rakaumbwa 2014 ne Jano Moller, Jonathan Levin uye Michael Gronager. The chikuru pokutungamirira wekambani ari vachiongorora blockages uye cryptocurrency kwema kuti kurwisa mari laundering uye kubiridzira. Makambani kuti dzinoita mabasa akafanana zvakawanda, asi anenge US madhipatimendi zvose, uyewo masangano European akadai Europol, inoshandawo Chainalysis.
Gore rakapera Chainalysis akagamuchira kupfuura $ 700,000 kubva US Department of Kumusha Security (DHS), US Internal Revenue Service (IRS) uye US Immigration uye Customs Control Service (chando) nokuti basa rayo. Also rapera, Kambani chaigara neZvapupu nemasangano private, sezvinoratidzwa Quarterly mishumo hunotaura zvakawanda vokukurukura uye ushamwari zvibvumirano.
Uye mumwe dzose vatengi pakati Chainalysis aiva US Federal Bureau of Investigation (FBI), izvo kakawanda kukasawedzerwa chekambani nhoroondo mumakore mashoma apfuura.
Assistance mu kuferefeta
Pamusana pamwe Chainalysis, kuti FBI vakakwanisa kuzadzisa zvinokosha kunoguma kuongorora zviito vechikamu pamusoro kusazivikanwa zvokutengeserana nzvimbo Silk Road, uyewo kudzidza pamusoro nezvokuzadziswa kusauka of Mt Gox Exchange. Shure kwezvose, ari Chainalysis vashandi yakawana zvisipo 650,000 BitCoins, izvo zvikazikamwa panguva kunzwa iri Congress.
Pamusoro pe, Vongai basa kuongorora kambani, zuva November 2017, US redzimhosva akarayira Coinbase Exchange kupa zvakavanzika mashoko kuti 14,000 vanozvishandisa. chisarudzo kwakadaro kwakaitwa muchiedza kuferefeta pedyo US Internal Revenue Service (IRS), izvo vaifungira kuti vanoshandisa Exchange kugamuchira mari kutengeswa cryptocurrency, kazhinji kacho, abve mitero. saka, maererano IRS mashoko nokuda 2015, mutero pamusoro Purofiti kubva akavhiyiwa pamwe bitcoin rwakabhadharwa chete 802 vanhu.
Chekambani Website rinoti Chainalysis anotenda cryptocurrency uye ichivharira rwokugadzira, uye chinangwa chekambani ndiko kupa masangano namaturusi kudzivisa mabasa enhema ari zvoupenyu mari, apo vachiremekedza kodzero zvakavanzika. zvisinei, saizvozvo, chekambani blockanalysis mabasa batanidza dzakananga vanhu zvakananga kwema pamusoro pomumbure.
saka, Vongai kuminamato Chainalysis, ari IRS, semuyenzaniso, monitors zviito yokuisira ose BitCoins nezvimwe cryptocurrencies uye monitors yokubhadhara mitero. Uye izvi zvinoreva kuti kwema vane cryptocurrencies, akadai bitcoin, haagoni kunzi kusazivikanwa. wo, Makambani kuti kushandisa Chainalysis mabasa vanogamuchira hwakadzama mishumo kwema pamusoro misa, zvavanokwanisa vatengi uye vamwe.
Chokwadi chokuti kambani Chainalysis ari kuwana zvakawanda vatengi pakati ehurumende vamiririri uye ezvirevo, matambudzo nhengo dzakawanda crypto munharaunda vanotenda remangwana cryptocurrency pasina ehurumende murau kodzero vose kusazivana. zvisinei, maererano musoro Hermitage Capital Fund Bill Browder, nokuda zviito makambani akadai Chainalysis, cryptocurrencies vari kuva kuwedzera anoyevedza uye yakavimbika nzira bhizimisi kuti makambani.
Marezinesi Japanese Exchange Zai ...
Previous Post:Blockchain News 26 Ndira 2018
Next Post:Blockchain News 27 Ndira 2018